अनलिमिटेड डेटा र भ्वाइस प्याकसहित टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक - Tech News Nepal Tech News Nepal
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवामा आकर्षक डेटा र भ्वाइस प्याकहरु तथा एफटीटीएच सेवामा समर अफर अन्तर्गत हाल उपलब्ध गराइरहेका विभिन्न प्याकेजलाई थप/परिमार्जन गरी अटम अफर उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सो अफर भोलि सोमबारदेखि तीन महिनासम्म लागू हुनेछ ।
अटम अफरमा नयाँ प्याकेजका रुपमा सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक उपलब्ध हुनेछ । यसमा ३० दिनसम्म चलाउन मिल्नेगरी रु. ५९९ मा अनलिमिटेड अननेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
यो अफर खरिद गरेपश्चात् सुलभ दरमा डेटा सेवा समेत लिन चाहेमा ग्राहकले रु. २९९ मा प्रतिदिन १ जीबीका दरले ३० दिनसम्म उपयोग गर्न सकिने ३० जीबी डेटा सेवा एड–अन–प्याकको रुपमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यदि ग्राहकले ६४ केबीपीएसभन्दा बढी गतिको डेटा सेवा प्रयोग गर्न चाहेमा जम्मा रु. ३० मा १ जीबी, रु. ४० मा २ जिबी र रु. ५० मा ३ जीबी डाटा २४ घण्टाभित्र प्रयोग गर्न सकिने गरी एड–अन–प्याककै रुपमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी अटम अफरमा ग्राहकले ३० दिनसम्म प्रतिदिन १ जीबी प्रयोग गर्न सकिने ३० जीबी डेटा सेवाको प्याक रु. ५९९ मा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यो अफर खरिद गरेपश्चात् ग्राहकले सुलभ दरमा भ्वाइस सेवा पनि लिन चाहेमा जम्मा रु. २९९ मा ३० दिनसम्म अनलिमिटेड प्रयोग गर्न सकिने एड–अन–प्याक खरिद गर्न सक्नेछन् ।
सो भन्दा बढी गतिको सेवा लिन चाहेमा जम्मा रु. ३० मा १ जीबी, रु. ४० मा २ जीबी र रु. ५० मा ३ जीबी डेटा २४ घण्टाभित्र प्रयोग गर्न सकिने गरी एड–अन–प्याककै रुपमा खरिद गर्न सकिनेछ ।
यसमा जम्मा रु. ७९९ मा अनलिमिटेड अननेट भ्वाइस सेवा, प्रतिदिन १ जीबीका दरले ३० दिन प्रयोग गर्न सकिने ३० जीबी डेटा, २०० वटा अननेट सन्देश, ५० मिनेट अफ नेट भ्वाइस र ५० वटा अफ नेट सन्देश पठाउने सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
यसमा जम्मा रु. ९९९ मा अनलिमिटेड भ्वाइस र ४०० वटा अननेट सन्देश पठाउने सुविधा, प्रतिदिन २ जीबीका दरले ३० दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ६० जीबी डेटा, १०० मिनेट अफ नेट भ्वाइस र १०० वटा अफ नेट सन्देश पठाउन सकिनेछ ।
यसमा प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि १५० मिनेट भ्वाइस, १.५ जीबी डेटा र १५ वटा अननेट सन्देश (अननेट) जम्मा रु. २९९ मा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यसमा जम्मा रु. ५९९ मा प्रतिदिन १ जीबीका दरले २८ दिन प्रयोग गर्न सकिने २८ जीबी डेटा उपलब्ध हुनेछ । यो प्याक लिनुभएका ग्राहकहरुले अनलिमिटेड भ्वाइस सेवा लिन चाहेमा जम्मा रु. २९९ मा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने एड–अन–प्याक खरिद गर्न सक्नेछन् ।
एक वर्षको सेवा लिँदा ५० एमबीपीएसको रु.३१,३०९ मा, ८० एमबीपीएसको रु.३९,३०९ मा र १० ०एमबीपीएसको रु.४७,३०९ मा उपलब्ध हुनेछ । यस प्याकको खरिदमा एसटिबीको शुल्क समावेश गरिएको छैन ।